Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nepal » Nepal: Riyadii sawir qaadaha waddada
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Nepal • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
sawir qaadista Nepal
Socod -bixintu waa soo jiidashada ugu caansan Nepal oo leh safaro caan ah sida Annapurna Circuit, Langtang iyo Everest Base Camp si loogu magacaabo dhowr. Socodsiinta waddooyinkan caanka ah ayaa sanadkiiba soo jiita in ka badan 150,000 oo booqdeyaal ah Nepal. Socod -bixiye ahaan waxaad filan kartaa marka aad tuulo gasho in carruurtu dhammaantood u soo baxayaan si ay u dalbadaan, “hal sawir fadlan.” Waxay gabi ahaanba jecel yihiin haddii aad sawirkooda qaadato ka dibna ku tus shaashadda LCD ee kaameradaada. Laakiin ma aha oo kaliya carruurta ku faraxsan inay ku jiraan sawirradaada, ku dhawaad ​​qof kasta oo ku nool Nepal ayaa kugu qasbi doona sawir.
Mudane! Mudane! Hal sawir, hal sawir, fadlan.
Nepal waa meel heer caalami ah oo loogu talagalay muuqaalka buuraha, iyada oo lagu faano siddeed ka mid ah afar iyo tobanka buurood ee ugu sarreeya adduunka.
Hoosta sare ee buurta weyn ee Everest, dadka reer Nepal ayaa sida caadiga ah ku faraxsan inay kaa qaadaan sawiradooda.
Tani waxay si weyn uga hadlaysaa aragtida guud ee ku saabsan booqdayaasha iyo kartida dabiiciga ah ee martigalinta ee qeexaysa dadka Nepal.
Haddii aad jeceshahay inaad sawirto sawirro cad oo dad ah, qaab dhismeed ama jidad u gaar ah, markaa waxaad jeclaan doontaa fursadaha sawir ee Nepal. Boqortooyadii hore ee Himalayan, oo hadda ah jamhuuriyad dimuqraadi ah ayaa ah meel heer caalami ah oo loogu talagalay muuqaalka buuraha, iyada oo ku faanaysa siddeed ka mid ah afar iyo tobanka buurood ee ugu sarreeya adduunka oo ay ku jiraan Mount Everest, oo ah meesha ugu sarraysa dhulka. Laakiin xagga sare waxaa ka jira adduunyo ikhtiyaarro sawir leh oo cajiib ah oo u gaar ah kuwaas oo la tartamaya sawirrada siddeedda waaweyn.
Dadka reer Nepal waxay ka mid yihiin dadka ugu raaxada badan Dhulka oo caadiyan ku faraxsan inay kaa qaadaan sawirradooda, haddii dabcan aad ku tusto kamaradaada, way jecel yihiin taas. Qiyaastii qaar ka mid ah macbudyada ragga quduuska ah ee loo yaqaan Sadhu (mararka qaarkood Saadhu) ayaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​lacag dhan 100 rupees, oo u dhiganta lacag doollarka Mareykanka ah si ay kuu soo dhigto laakiin dadka caadiga ah ee laga yaabo inaad jidka kula kulanto malaha wax ku weydiin maayaan . Waxay kaliya u taagan tahay inay sabab u noqoto in waddankii sannado badan albaabka laga soo geli jiray Dashrath Rangasala Stadium, oo ah garoonkii ugu weynaa ee ujeeddooyinka badan lahaa ee dalka, ay ka muuqatay calaamad ay ku qoran tahay “Martidu waa Ilaah” ama aayadda Sanskrit, Atithi Devo Bhawa. Waxay si weyn ugu hadashaa dabeecadda guud ee ku saabsan booqdayaasha iyo awoodda dabiiciga ah ee martigalinta ee qeexaysa dadka Nepal, samaynta Nepal waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya “liiska baaldi”.
Ka sokow sawir qaadista “dadka” ee cad, waxaa Nepal ku yaal waddooyin jid -gooyo ah oo qalaad oo gaar ah. Anigoo ah sawir -qaade ka shaqeeya Nepal, weligey kama cararin meelo aan wax ku sawiro iyo xitaa sanado badan ka dib markii aan sawir ka qaado Nepal mar kasta oo aan gees u leexdo waxay umuuqataa inay jirto goob kale oo sugaysa in la qabto. Waxaa jira jaangooyooyin aad u badan oo sugaya in laga helo meelaha sida caasimadda Kathmandu oo aan la filayn, iyo koboc aan qorshaysnayn, waxay abuurtay waddo dhab ah oo jidadka lagu meeraysto. Markaa kor u qaad batterigaaga, qaabee kaararka kamaradahaaga oo u diyaari sawir qaadayaasha waddada riyadu waa rumowday Nepal.
Sawir qaadista waddada ayaa ku saabsan in maqaar kabaha la dhigo oo la garaaco garaaca, laakiin, intii aan xusay waddooyinku si dhaqso ah ayey isku rogi karaan, looma baahna welwel waxaadna ku bixi kartaa si kalsooni leh maaddaama dadka intiisa badan ee Nepal ay tixgelinayaan wanaaggaagu inuu noqdo waajibaad shaqsiyeed, xataa haddii ay hadda uun ku kulmeen. Dhowr sano ka hor gabadh dhallinyaro ah oo gurigayaga joogtay waxay ogaatay saacad ka dib si ay u dhex wareegaysay, waxayna ku wareertay jidka ay u mareyso si ay u gaarto gurigeenna. Waxay naga soo wacday taleefankeeda gacanta oo xaaskayga, lafteeda Nepal, ayaa ku amartay inay tagto dukaanka ugu dhow oo ay u dhiibto taleefanka qof kasta oo jooga. Wadahadal socday shan daqiiqo ka dib ayaa dukaanlihii wuxuu xiray dukaankii, wuxuu marti-geliyihii qalloocsanaa saaray mootada mootadiisa oo wuxuu geeyey albaabkeenna hore. Taasi waa nooca martigelinta aad ka heli doonto Nepal. Waa meel aysan dadku kaliya ku siin tilmaamo, waxay adiga shakhsi ahaan kuugu socon doonaan meesha aad u socoto.
Waxaa ka mid ah fursadaha sawirrada badan ee magaalada caasimadda ah ee Kathmandu hubi inaad booqato Suuqa Asan, halkaas oo dukaamaysiga maxalliga ah, Swayambhunath oo inta badan loogu yeero "macbudka daanyeerka," Boudha Stupa, astaanta astaanta ah ee la dhisay qarnigii 14aad laguna soo bandhigay xayeysiisyo badan oo dalxiis loogu talagalay Nepal, iyo dabcan Pashupati, magaca guud ee loogu talagalay Macbadka Pashupatinath, oo ka mid ah Macbudyada Hindu ee ugu muhiimsan Koonfurta Aasiya. Dhammaan goobahan waxay siiyaan fursado fara badan sawir qaadaha socdaalka ah. Waxaa jira wakaalado badan oo dalxiis oo qabanqaabin doona dalxiis sawir waddo ah, ama waxaad kaliya qabsan kartaa khariidad oo adigu iska bixi kartaa. Kathmandu waa magaalo ay ka buuxaan dhaqan iyo muuqaal ka duwan meel kasta oo kale oo Dhulka ah waxaana jira fursado aan xadidnayn oo sawir qaadis halkaas ah, oo si daacadnimo ah guud ahaan Nepal oo dhan laga bilaabo dhererka Everest ilaa Terai, oo ah dhulka fidsan ee Nepal halkaas oo ah meesha uu ku dhashay Buddha.
Mid ka mid ah sawirqaade ayaa ka sheegay sawir qaadista waddada Nepal in ay ahayd “Chaotically Cool” taasina waa tilmaan ku habboon mid ka mid ah meelaha ugu gaarka ah ee ku haray Dhulka.